Amanyathelo okhuseleko kulondolozo lwe-infrared spectrometer
Kwiminyaka yakutshanje, icandelo lokhuseleko lokusingqongileyo lithathe ithuba ngemigaqo-nkqubo elungileyo, ekunokuthiwa iyathandwa. Izinga lokukhula kweshishini liphindaphindwe kaninzi kwi-GDP. Kwangelo xesha, ukwanda kwamaxabiso omvuzo we-enterp yokhuselo lokusingqongileyo ...
Umgangatho omtsha wokumiselwa kweoyile emanzini uyakwenziwa
Akumangalisi ukuba abantu abaninzi bathi izixhobo zokukhusela okusingqongileyo phantse kuyo yonke indawo, nokuba yimveliso yoshishino okanye kubomi bemihla ngemihla. Oku "kungena" kuthuleyo kuzisa amashishini amaninzi kunye nokuleqa imali. Ngokwezibalo zoluntu, izinga lokukhula komndilili ...
Iinkcukacha zichonga impumelelo okanye ukusilela kwabenzi be-infrared spectrum